Archdiocese of Mandalay blog: September 2013
Fr. F.M.Hervey. (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဟဲဗီးသည် (၁၈၇၇) ခုနှစ် မေလ (၂) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရဟန်း သိက္ခာခံပြီးနောက် (၁၉၀၁)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
(၁၉၀၂) ခုနှစ်မှ (၁၉၂၉) ခုနှစ်အထိ စိန်ဇေးဗီးယား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ စ်ိန်ဇေးဗီးယား အလယ်တန်းကျောင်းကိုပါ အုပ်ချုပ် ခဲ့ရသည်။ စိန်ဇေးဗီးယား ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီး မကြာမီ တမီးလ်ဘာသာ စကား သင်ကြား တတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဟဲဗီး၏ လုပ်ငန်းများကို နောင်တွင် ဆရာတော်ဖြစ်မည့် ဖါသာရ် ဖါးလီးယေးက ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးသည်။
(၁၉၁၀)ခုတွင် မိဘမဲ့ တမီးလ် ယောက်ျားကလေးများ ဂေဟာ ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ (၁၉၁၂) ခုတွင် စိန်ဗင်းဆင်း ဒီပေါလ်အသင်း ဖွဲ့ခဲ့သည်။ (၁၉၂၀)ခုနှစ် နာရေးအသင်း ဖွဲ့စည်း၍ မြင်းတစ်ကောင်ဆွဲသော အသုဘယာဉ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် အိန္ဒိယပြည် မဒရပ်မြို့မှ တပ်ခွဲတစ်ခွဲ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ တမီးလ် အမျိုးသားဦးရေ တိုးတက်လာသည်။ ၂
(၁၉၂၆) ခုနှစ်တွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေစင် ဂျူဗလီပွဲတော် ကျင်းပခဲ့သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံမှ ကေအိုင်အိပ်ခ်ျ (K.I.H)ဘွဲ့ထူး ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၂၉) ခု သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် တမီးလ် သီလရှင်ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဟဲဗီးသည် ရွှေဘိုမြို့ရှိ ဖါသာရ်ဟဲထံ ခေတ္တ သွားရောက်စဉ် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်၍ (၁၉၂၉) ခု စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် ရုတ်တရက် ပျံတော်မူသည်။ ရွှေဘိုမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားကျောင်း အနီးတွင် ဂူသွင်း သင်္ဂြိုလ်သည်။ ၃
၂။ လော်ရီပေါလ် (စိန်ဇေးဗီးယား) မန္တလေး၏ မှတ်တမ်း
၃။ လော်ရီပေါလ် (စိန်ဇေးဗီးယား) မန္တလေး၏ မှတ်တမ်း
ဖါသာရ် မွန်ဒရိုး (၁၈၇၅-၁၉၅၂)
Fr.L.Moindroit.(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် မွန်ဒရိုးသည် (၁၈၇၅) ခု ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၀၇) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။ ၁
ဖါသာရ်မွန်ဒရိုးသည် မေမြို့၌ သာသနာ အမှုတော် ထမ်းရသည်။ (၁၉၁၃) ခုနှစ်တွင် အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော သခင်မ ဘုရားကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့ရာ (၁၉၁၄) ခုနှစ်တွင် ပြီးစီး ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် မွန်ဒရိုးသည် မေမြို့ အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော သခင်မဘုရားကျောင်းတွင် (၁၉၁၃) မှ (၁၉၅၁) ခုနှစ်အထိ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၅၂) ခုနှစ် မေမြို့၌ ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် ဂီးရဲ (၁၈၈၂-၁၉၄၆)
Fr.N.L.Gier.(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဂီးရဲသည် (၁၈၈၂) ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၀၇) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁
(၁၉၁၀)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလ အထိ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဆရာတော် ဖူးလ်ကီးယေး၏ (Procurator) အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၄၆) ခု ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ပျံတော်မူသည်။
ဖါသာရ် အာလာတ် (၁၈၈၄-၁၉၂၉)
Fr.L.Allard (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် အာလာတ်သည် (၁၈၈၄) ခု ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၀၈) ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။ ၁
ရွှေဘို ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဟဲ နောက်တွင် ဖါသာရ်အာလာတ်သည် ရွှေဘိုနှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဘုရင်ဂျီရွာများကို ဆက်လက် ကြည့်ရူ ခဲ့သည်။ ၂
ဖါသာရ်ရေမန်းဒက် ပျံတော်မူပြီးနောက် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး လစ်လပ်နေသော ချောင်းဦးသို့ ဗန်းမော်ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်မှ ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ ဖါသာရ် ရေမန်းဒက် စုဆောင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများနှင့် ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် ရှိသော်လည်း ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ၃
ဖါသာရ်အာလာတ်သည် ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် (၁၉၂၆) ခု သြဂုတ်လ မှ (၁၉၂၇) နိုဝင်ဘာလ အထိ အမှုထမ်း ခဲ့သည်။ ၄ ဖါသာရ် အာလာတ်သည် (၁၉၂၉) ခု စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ပျံတော်မူသည်။
၂။ The Voice, XVII-12, 275
၃။ The Voice,Jan, 1925,P-15
၄။ Baptism record, Chaung U
Fr. C Mandin (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် မန်းဒင်းသည် (၁၈၈၇) ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၁၁) ခု ဇန်န၀ါရီလ (၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
ကျောက်ဆည်နယ် ဘာသာဝင်များ ကြည့်ရူရသည်။ အထူးသဖြင့် မန်ကျည်းတောရွာတွင် ရှိသော ဘာသာဝင်များကို တာဝန်ယူ ကြည့်ရူရသည်။ ဤရွာတွင် စိန်အင်းအမည်ရှိသော ဘုရားကျောင်းကို (၁၉၂၉) ခု ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့က ကောင်းကြီးပေးပွဲ ကျင်းပသည်။ ဖါသာရ်ဟဲဗီးနှင့် ဖါသာရ်အာလိုက်ဆီတို့ တက်ရောက်ကြသည်။ ၂ ဖါသာရ်ဟဲနောက် ရွှေဘိုနယ် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် (၁၉၃၄)ခု မှ (၁၉၅၁)ခုနှစ်အထိ တာဝန်ယူရသည်။ ဖါသာရ် မန်းဒင်းသည် (၁၉၅၁) ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၉) ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ပျံတော်မူသည်။
၂။ The Voice ,2929,Sept,P-214
ဖါသာရ် ဖါးလီးယေး (၁၈၈၈-၁၉၆၈)
Fr.A.Fallier.(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် ဖါးလီးယေးသည် (၁၈၈၈) ခု ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၁၄) ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ၁
ရေနံချောင်း၌ သာသနာသစ် ဖွင့်လှစ်၍ သာသနာပြု ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီး ဖူးလ်ကီးယေးကို ဆက်ခံသော ဆရာတော်အဖြစ် (၁၉၃၀) ခုနှစ် အောက်တုိဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ များမကြာမီ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း သာသနာမှာ ဆရာတော်တစ်ပါးအတွက် အလွန် ကျယ်ပြန့်ကြောင်း တွေ့မြင်သဖြင့် ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်းကို ကျိုင်းတုံ သာသနာသို့ ၄င်း၊ မိုးကုတ်၊ ကသာ၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနားစသည့် မြောက်ပိုင်းကို စိန်ကော်လန်ဘန် အသင်းဂိုဏ်းသို့ ၄င်း၊ လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်သည်။ ဆရာတော် ဖါးလီးယေးသည် အထက်ဖေါ်ပြပါ သာသနာနယ်မြေကို ခွဲဝေပေးပြီး နောက် ချင်းပြည်နယ်တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်း စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခင် ဖါသာရ်လောရင်း စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရှိခဲ့ပေ။ ၂
ဆရာတော် ဖါးလီးယေးသည် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း သာသနာပြုရေး အတွက် ဖါသာရ်အိုဒရင်း၊ ဖါသာရ် အာလက်ဆီ ဦးဘဒင်နှင့် တရားဟော ဆရာ(၃) ယောက်တို့ကို သက္ကရာဇ် (၁၉၃၄) ခုနှစ်တွင် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (၁၉၃၅) ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ်ဖူးရ်နဲအား ဒုတိယအကြိမ် စေလွှတ်၍ (၁၉၃၆) ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ် အန်ထော်နီ ဦးကျော်မင်းအား တတိယအကြိမ် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဟန်နရီကိုလည်း (၁၉၃၆) ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးတို့သည် မင်းတပ်မြို့နှင့် လူရှည်ရွာတွင် (၂)ပါးစီ ခွဲနေထိုင်ကြပြီး သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အသက်ကြီးသူများသည် မိမိတို့ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်မှုကို စွန့်လွှတ်ရန် ခဲယဉ်းသော်လည်း မိမိတို့ သားသမီးများ ခရစ်ယာန် ဘာသာတရား လိုက်ရန် ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကလေးပေါင်း (၅၀)ကျော် ဆေးကြောခြင်း ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လူပေါင်း (၁၇) ဦးအား ခရစ္စမားပေးခဲ့သည်။ လူ(၅၀၀) လောက် ဘာသာတရား သင်ကြားနေကြသည်။ (၁၉၃၆) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ဖရန်စစ္စကင် သီလရှင် (၆) ပါးနှင့် မင်းတပ်မြို့ သီလရှင်ကျောင်း ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၃
ဆရာတော် ဖါလီယေးသည် တောင်တွင်းကြီးနယ် ချင်းလူမျိုးတို့အား သာသနာပြုရန် ရမည်းသင်း ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် စတီးဗင်း ဦးဘအိုအား သာသနာ စတင် ဖွင့်လှစ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် စတီးဗင်သည် ချင်းညောင်ပင်သာရွာသို့ သွားရောက်၍ တရားဟော ဆရာ(၂) ယောက် ခန့်ထားခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးသည် ရမည်းသင်းမှနေ၍ ရံဖန်ရံကာ သွားရောက် ကြည့်ရူသည်။ ၄
ဆရာတော် ဖါးလီယေးသည် မြောက်ပိုင်း ချင်းတောင် သာသနာပြုရေးအတွက် (၁၉၃၉) ခုနှစ် ဆောင်းကာလတွင် ဂိုဏ်းထောက် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ် မေးနီးရဲနှင့်အတူ ကုန်းလမ်း ရေလမ်းမှ ကလေးဝအထိ သွားရောက် ခဲ့ကြသည်။ ထိုမြို့မှ တဆင့် တီးတိန်နှင့် တွန်းဇံရွာများသို့ တောင်ကြို တောင်ကြား လူသွားလမ်းမှ လမ်းပြသူ အကူအညီဖြင့် (၄)ရက်တိုင်တိုင် သွား၍ သာသနာပြုရေး အတွက် လေ့လာခဲ့သည်။ ထိုနောက် မြောက်ပိုင်း ချင်းတောင် တီးတိန်နှင့် တွန်းဇံရွာသို့ ဖါသာရ် ဗလီဗေးနှင့် ဖါသာရ် မိုးဇယ်တို့အား (၁၉၄၀) ခုနှစ်တွင် စေလွှတ်၍ သာသနာပြုလုပ်ငန်း စတင် ဖွင့်လှစ်ရာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၅
ဂျွန်ဘော်စကို စလေးဆီးယန်း အသင်းဂိုဏ်းဝင် ရဟန်းများအား ဖိတ်ခေါ်သဖြင့် (၁၉၃၉) ခုနှုစ်တွင် မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိလာပြီး စာသင်ကျောင်း ဖွင့်၍ စာသင်ကြားပေးသည်။ အနီးစခန်းတွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းနှင့် မန္တလေးတွင် စက်မှု လက်မှုပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်ထားခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်ရှိ ဘုရားကျောင်းကို (၁၉၃၀)ခုနှုစ်တွင် ဆရာတော် ဖါးလီးယေး ဆောက်လုပ်၍ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။
(၁၉၅၉) ခုတွင် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် ဖါးလီးယေးသည် မမာမကျန်းဖြစ်၍ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားသဖြင့် ဆရာတော် ဂျိုးဇက် ဦးဝင်းသည် (၁၉၅၉) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် မန္တလေး သာသနာဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်အဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ဆရာတော် ဖါးလီးယေးသည် (၁၉၆၈) ခု ဇန်န၀ါရီလ (၁၂)ရက်နေ့တွင် မန္တလေး၌ ပျံတော်မူသည်။
၂။ ကက်သလစ်ရာဇ၀င်၊ စာမျက်နှာ-၃၅၃-၃၅၄
၃။ ဦးချို။ဆရာ၊ (နဘက်)၏ မှတ်တမ်း
၄။ ဦးချို။ဆရာ၊ (နဘက်)၏ မှတ်တမ်း
၅။ မျိုးကြဲသူ၊ ၁၉၆၉ ၊အောက်တိုဘာလ
ပုထုဇဉ်နှင့်၊ အစဉ်နွယ်ထား၊ လောကီသားမို့၊ အားနည်းတတ်သူ၊ ငါ့လိုလူဟာ ရဟန္တာဖြစ်ရေး၊ အဝေးကြီးပါ၊ စိတ်မှာ စဉ်းစား၊ အတွေးမမှားနဲ့။
ဘ၀နာစီးဖြန်း၊ ကမ္မဌာန်းရှု၊ လောကီမူကို၊ ခ၀ါ လိုချ၊ ဓမ္မကိုခင်၊ သူတော်စင်သာ၊ ရဟန္တာလို့၊ စိတ်မှာထင်မှတ်၊ မဆုံးဖြတ်နဲ့။
ရဟန္တာဆိုတာ၊ မဟာလူစွမ်း၊ အထူးအဆန်းမဟုတ် မွေးထုတ်ကတည်းက လုံးဝဥဿုံ၊ ပြည့်စုံလာသည့်၊ ပါရမီရှင်ဟု၊ စိတ်တွင် တွေးတော၊ အပြောမကြီးနဲ့
ဥပမာ အလို့ငှာ၊ ရဟန္တာတချို့မှာ -
စိန်သြဂုတ်စတင်း၊ အလင်းနဲ့ လွဲ၊ အပြစ်ထဲမှာ၊ လွန်ကဲ မိုက်မှား၊ ဒုစရိုက်များ၌ လိုက်စားပျော်မွေ့၊ ဘုရားမေ့ သူ၊ အပြစ်ဟူ သမျှ၊ စွန့်စားခဲ့ရလေသူ . . . .
အပြစ်ပြုမည့် အစား၊ အသေခံသွားမယ်၊ စိတ်ထား မြင့်မြတ်၊ တရားဖက်သည့် အသက်ငယ်ငယ်၊ သတ္တိ ကြွယ်သော၊ လူငယ် ရဟန္တာ၊ ဒေါမိနစ် ဆာဗီယိုရှိခဲ့တယ် . . . .
တဏှာဝတ်ရုံ၊ ဆင်မြန်း ခြုံကာ၊ ကြုံရာဝင် စိုင်း၊ မိန်းမ ရိုင်းလေး၊ ရာဂ သွေးပွက်၊ ညဉ့်ပျော်ငှက်လို၊ ကျက်စားရာမှ၊ ရဟန္တာဘ၀ ပြောင်းခဲ့သူ မေရီမာဒလေးနား
ဆင်းရဲ ရိုးသား၊ စိတ်ထား ပြည့်ဝ၊ လွန်နှိမ့်ချတဲ့၊ မြတ်လှရဟန်း၊ လျှောက်လှမ်းခြေရာ ပြခဲ့ပါသည်။ ရဟန္တာကြီး ဂျွန်မေရီ ဗီယားနီ . . .
စိန်မော်နီကား၊ သားဆိုး မိခင်၊ အိမ်ထောင် ရှင်မ၊ ဘ၀ကဆိုး၊ မျက်ရည်မိုးတွေ ဖြိုင်ဝေ သက်ဆင်း၊ ဆုတောင်းရင်းနဲ့၊ ဖြတ်နင်း လျှောက်လှမ်း၊ ရဟန္တာပန်းကို ခြွေခဲ့သူ
နန်းထိုက်တော်ဝင်၊ ဖြူစင်ခြင်းပန်း၊ မနွမ်းရအောင်၊ ကျင့်ဆောင်ပေးလှူ၊ အသဲဖြူသော၊ ပျိုချောကညာ၊ အသက် ပါစတေး၊ သွေးမနည်းတဲ့ မာရီယားဂေါ်ရက်တီ . . . .
ဤသို့ -ဤပုံ အလွှာစုံမှ၊ ဘ၀မရွေး၊ ကလေးမဟူ၊ လူငယ်ယောကျာ်း၊ မိန်းမသားရော၊ ကြိုးစား ကျင့်ကြံလို့၊ ရဟန္တာအမှန် ဖြစ်ခဲ့ကြလေပြီ။
သူတို့ ပုံစံ၊ ရည်သန် အတုယူ၊ စံနမူထား၊ ကြိုးစား ကျင့်ကြံ၊ မှန်မှန် ဖြေးဖြေး ရိုးရိုးလေးသာ၊ ကျင့်ကြပါစို့၊ သင်တို့ ငါတို့ ဘာကြောင့်မို့ ရဟန္တာ မဖြစ်နိုင်မှာလဲ။